३१ वर्षपछि मावल घुमेर इलाम झरे डा. केसी (तस्बिरमा डा. केसी यात्रा) – Health Post Nepal
२०७६ कार्तिक २ गते २१:१०
चिकित्साशिक्षा सुधार अभियान्ता डा.गोविन्द केसी शनिबार साँझ १६औँ अनसन बसेको ठाउँ पूर्वी नेपालको इलाम पुगेका छन् । १६ औँ अनशन इलामबाट सुरु गरेका डा. केसी सो क्रममा साथ दिएका स्थानीयलाई धन्यवाद दिन इलाम पुगेका हुन् ।
कार्तिक ८ गतेसम्मका लागि विभिन्न मागसहित अल्टिमेटम दिएका उनले जागिरे जीवनबाट अबकास पाएसँगै पहिलो साता बाल्यकाल बिताएको मामाघर र जन्मस्थानको भ्रमणपछि इलाम झरेका हुन् । ‘यो बिचमा आउनै भ्याएको थिइन्, शनिबारै खुर्कोटबाट माइक्रो चढेर भर्खरै इलाम आइपुगेँ’ उनले शनिबार राति साडे आठबाट हेल्थपोस्टसँग टेलिफोनमा भने ।
कार्तिक २७ गते ६४ औँ जन्मदिन मनाएका डा. केसीले २६ गते नै त्रिविबाट अनिवार्य अवकास पाएका थिए । अवकासकै दिन केही विद्यार्थी र सहयोगीका साथ लिएर भक्तपुरस्थित भाइको घरमा सामान सारेर डा. केही भोलीपल्टै दोलखा हिँडेका थिए । ३४ वर्ष चिकित्सासेवामा बिताएका डा. केसीले विद्यालय शिक्षा पूरा गरेको मामाघर दोलखाको झुले पुगेका थिए । आफू ३१ वर्षपछि मामाघर पुगेको उनले बताए ।
उनले झुलेमा २ रात बिताएका थिए । मावली गाउँ झुलेमा उनले आफ्ना मामासँग भेट गर्नुका साथै बाल्यकालमा खेलेका काम गरेका स्थानको भ्रमणमा समेत बिताएका थिए । उनी सोलगतै जन्मस्थान रामेछाप पुगेका थिए । ‘अब कता जानुहुन्छ त ?’ हेल्थपोस्टको प्रश्नमा डा. केसीले भने, ‘पहिला काठमाडौं फर्किएर बाँकी प्रक्रिया मिलाउँछु अनि सोचौंला’
१६औँ अनशनमा साथ दिएका इलामवासीलाई धन्यवाद दिएर फर्किएसँग चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि बाँकी संघर्ष थाल्ने योजना उनको छ । संभवत उनले काठमाडौं फर्केपछि १७ औँ अनशन सुरु गर्नेछन् ।
तस्बिर : डा. केसीका आफन्तका फेसबुकबाट लिइएको हो